Maxkamada gobolka Banaadir ayaa xukun ciqaabeed ku riday 9 mas’uul oo ka tirsanaa… – Hagaag.com
Maxkamada gobolka Banaadir ayaa xukun ciqaabeed ku riday 9 mas’uul oo ka tirsanaa…
Posted on 24 Agoosto 2020 by Admin in National // 0 Comments
Maxkamada gobolka Banaadir ayaa maanta xukun ciqaabeed ku riday 9 mas’uul oo katirsan Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya oo lagu helay musuq maasuq ku saabsan xatooyo hanta dadweyne.
Maxkamada gobolka Banaadir ayaa Cabdillaahi Xaashi Cali oo ah agaasimihii guud ee Wasaaradda Caafimaadka ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 59 malyuun oo shilin Soomaali ah. Waxaa sidoo kale ay ka reebtay inuu maamulo xafiis dambe oo dadweyne.
Sidoo kale, agaasimihii maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayay maxkamadu ku riday 18 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 59 malyuun oo shilin Soomaali ah. Isagana waxaa laga mamnuucay inuu mar dambe ka shaqeeyo xafiis dadweyne.
Mahdi Abshir Maxamed, madaxii xisaabaadka mashruuca wacyi galinta caafimaadka ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, ayaa lagu xukumay 12 sano oo xarrig ah iyo ganaax lacageed oo dhan 59 malyuun oo shilin Soomaali ah. Masuulkaan waxaa isna laga reebay inuu ka shaqeeyo xafiis dadweyne ama dowladdeed.
Bashiir Cabdi Nuur, ahna xisaabiyihii mashruuuca malaariyadda iyo HIV/AIDs ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, waxaa lagu xukumay seddax sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29 malyuun oo Shilin Soomaali iyo ka reebista shaqo dadweyne muddo 5 sano ah.
Dhinaca kale, maxkamadu waxay xoriyadooda usoo celisay 5 eedeysane oo katirsanaa shaqaalaha waaxyaha Wasaaradda Caafimaadka oo lagu waayay dambiyadii lagu soo eedeeyay wayna fasaxday.